Tononkalo efatra no atolotra
Matetika ny zavatra iainan’ny tenany na iainan’ny mpiara-belona no fototra ipoiran’ny aingam-panahin’ny mpanakanto nampikalo hoy ny sasany. Santionany ary ireto niainga tamin’izao fisian’ity aretina coronavirus ity
Azo ahorina indray ve ny maha-Malagasy?
Tradition annuelle d'Ambohitrabiby
Le « nouvel an malagasy de l’Imerina ou Taombaovao Malagasy» entre mars et mai 2020
sam il y a 2 années
65000 mira 9000 hono e
Niarahana nanaraka teto ny figorisangorisan’ny resaka ‘panier garni’. Samy nanana ny filazany samy nanana ny fanazavany ny manam-pahefana. Indro misy fanangonana ny hevitra voalazan’ny mpanabe sy tononkalo roa hamehezana ny tian-kambara.
Hoy aho hoe...
Tahaka ny fanaontsika eto dia mindrana isika ny asa soratr’ireo mpanakanto na misy miantso koa hoe mpitononkalo. Ny fihetseham-po nanomboka tany amin’ny krismasy ary niafara tamin’ny fiarahana tratry ny taona 2020 no ataontsika. Isaorana azy ireo ny fanekeny hizara ny kantony ho antsika. Ho zina ny taona e.
Aingam-panahy ho an'i Dadah Rabel
Nangonin'i Chico il y a 2 années
Fahafatesana ô, nahoana ianao no nisy... Tampoka indray koa no nahafatesan'i Dadah Rabel, mpihira sy mpamoron-kiran'ny Tarika Mahaaleo. Ny alahady 3 novambra no nodimandry i Andriabela Rakotobe, fantatra kokoa amin'ny anarana mahampanakanto Dadah Rabel.